ရခိုင် အလယ်ပိုင်း မြေပုံမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေ လမ်းအနီးမှာ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်
ရခိုင် အလယ်ပိုင်း မြေပုံမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ ရန်ကုန်-...
1 ธ.ค. 2562 - 00:27 น.
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ မြောက်ပိုင်းကနေ အလယ်ပိုင်းအထိ ရောက်ရှိလာနေပြီး နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်မှာ မြေပုံမြို့နယ်က ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်း အနီးမှာ အပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ ရခိုင်က ဘီဘီစီ သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။
အခုလို တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လို့ ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွေ၊ ကုန်တင်ယာဉ်တွေ အပါအဝင် ယာဉ်အသွားအလာတွေ ရပ်ကုန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခု တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ နေရာတွေဟာ မြေပုံမြို့နယ်က ရန်ကုန်-စစ်တွေကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၄၁ နဲ့ မှတ်တိုင်အမှတ် ၃၀ အနီး ဝန်းကျင်တွေ ဖြစ်ကြပြီး တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်တဲ့ အတွက် တပ်မတော်က ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ စစ်ကူ လာပစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွက ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲဟာ တစ်နေကုန် ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦးက အတည်ပြု ပြောကြားပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ အေအေတို့အကြားက ဒီတိုက်ပွဲတွေကို တပ်မတော်ဘက်က တစ်နေ့တည်းမှာ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ၆ ကြိမ်အထိ လာရောက်တိုက်ခိုက်တယ်လည်း ဒေသခံတွက ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေဟာ မြေပုံမြို့နယ်က နေရာ သုံးခုမှာ မနက်က ၈ နာရီကျော်က စပြီး ညနေ ၅ နာရီကျော်ထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားနေတယ်၊ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ နေရာတွေ အင်းကြမ်းနဲ့ ဟင်းခရော်ကြားက ဂြင်းချောင်း၊ ဆတ်ရရွာနဲ့ စညင်းကျေးရွာအကြား၊ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ဖြစ်တာက ကံ့ကော်ချောင်းရွာအနီးမှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်ကလည်း ကျောက်တော်မြို့နယ် ကုလားတန်မြစ်ထဲက ရေတပ် သင်္ဘောအုပ်စု တစ်ခုကို အေအေကနေ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ အတွက် တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့် အမျိုးသား နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး တစ်ဦးက ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်တဲ့ အတွက် စစ်တွေ ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှာလည်း နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် မနက်ပိုင်းမှာ မိုင်းပေါက်ကွဲတဲ့ အတွက် နွားကျောင်းနေတဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် လူငယ် တစ်ဦး နေရမှာတင် သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရခိုင် အလယ်ပိုင်း မြေပုံမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ ရန်ကုန်-စစ်တွေ လမ်းအနီးမှာ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်